Top European Train Tours You Shouldn't Miss | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > သင်မပျက်မကွက်ဘဲနေရမည်ထိပ်တန်းဥရောပရထား Tours မှ
ဘယ်နေရာမှာမဆိုခရီးသွားလာအမြဲအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်လှပသောမြို့ကြီးများရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လုပ်, ငါတို့ဥစ်စာထဲကနေအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နိုင်ငံသို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှု၏သမိုင်း. သို့သျောလညျး, သငျသညျအိမျကနေမှဝေးသွားပါရန်မလိုပါ လှပသောအရပ်တို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ. ခြောကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးသွားရဲ့ဆန္ဒစာရင်းတွင်နေရာတစ်နေရာထိုက်တစ်မူထူးခြားတဲ့ကျက်သရေနှင့်အတူအနည်းငယ်ဥရောပရထားခရီးစဉ်ရှိပါတယ်. မှ အလွန်နှစ်သက်ဘွယ်ကောင်းသော ကြွယ်ဝသောသမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူမြို့တော်မှဥရောပမြို့ရွာ, သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ရာမြို့ကြီးများရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အချိန်ယူ.
ကျနော်တို့ကနည်းနည်းပူနွေးပြည်သို့သွား, အထူးသ, ဘစျက်ကီနိုင်ငံ၏လှပသောဒေသမှ. ဤတွင်ကျနော်တို့ယဉ်ကျေးမှု၏ဒုတိယဥရောပမြို့တော်ဘာရှာတွေ့ 2016: စန်း Sebastian. မြောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်တည်ရှိသောဤလှပသောမြို့အမြဲယင်း၏များအတွက်ကမ္ဘာကြီးဇယားထိပ်ဆုံးမှ gastronomic ကမ်းလှမ်းမှုကို နှင့်၎င်း၏ သွက်တွေက. သို့သော်ငြားလည်း, surfing, ပါတီများနှင့်ဖြေလျော့ပေးခြင်းလေထုသင်နှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျလိမ့်မည်တစ်ခုခုများမှာ. အဲဒါကိုဘုံဖြစ်ပါသည် တွေ့ဖြစ်ရပ်များ ဒါေၾကာင့္အနုပညာ, ဂီတ, နှင့်ကခုန်မြို့သူမြို့သားအားလုံးထောင့်၌. ထိုကွောငျ့, it is one of the greatest in စပိန် နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥရောပရထားခရီးစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သုံးဖြုန်းက၎င်း၏အကောင်းဆုံးသောအရပ်တို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောနေ့ရက်နှင့်ပင်လယ်ကအရသာညစာနှင့်ကော့တေးနှင့်အတူညနေပိုင်းတွင်ပြီးဆုံးရန်.
၏စိတ်နှလုံးထဲမှာ ဂျာမနီ, ဘာလင်ကနေတစ်နာရီခန့်, သငျသညျလက်လွတ်မသငျ့သညျနောကျတမြို့လည်းမရှိ. Leipzig ပို. ပို. မြို့တော်မှအများဆုံးခေတ်သစ်နှင့်အလားအလာအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာနေသည်. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကြောင့်ယင်း၏သည် Illustrious သမိုင်း, Bach နှင့် Wagner နဲ့တူအမည်များနှင့်ဆက်စပ်; သို့မဟုတ်, ဖြစ်ကောင်း, ၎င်း၏ကြီးမားသောအစိမ်းရောင်နေရာများများအတွက်, သေးမှန်းဆလက်ဖြင့်သိမ်းပိုက်မဟုတ်. ဒါဟာအစက၎င်း၏တိတ်ဆိတ်အသက်ဝိညာဉ်ကိုအဖြစ်နိုင်, အနုပညာနှင့်ဂီတထူးခြားသောနေရာ. အဖြစ်ဝေးကြက်သရေဥရောပရထားခရီးစဉ်ကိုသွားအဖြစ်, ဒီတစ်ခုကသေချာပေါက်ရကျိုးနပ်သည်.
Leipzig ရထားမှ Bremen
Leipzig ရထားမှ Hanover
အနောက်နိုင်ငံတွေရိုင်းမီးရထားဥရောပရထား Tours မှ, ဂျာမနီ
စိမ်းလန်းစိုပြေချစ်သောသူလူတိုင်းအတွက်, နောက်ကောက်အလှတရား, ရဲတိုက်, နှင့်နေဝင်ချိန်စပျစ်ဥယျာဉ်ချိုး, သငျသညျကိုသှားသငျ့ပါရှိရာရိုင်းမြစ်တလျှောက်ဒီသာယာလှပလမ်းပိုင်းဖြစ်ပါသည်. အကြားရထားစီးနင်း ဂျာမန်မြို့ကြီးများ Cologne နှင့် Mainz သငျသညျကာလအစဉ်အမြဲသတိရပါ့မယ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ၎င်း၏ရုပ်ပုံ-စုံလင်သောရှုခင်းများအသက်ရှူသင်ချန်ထားမည်! စစ်မှန်သော Romantic သူကိုပျော်ရွှင်နောက်ဆုံးတွင်နှင့်ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်မှော်ယုံကြည်မှတဆင့် peeking ဟာချစ်စရာကောင်းရဲတိုက်ကိုးကွယ်ကြလိမ့်မည် အစိမ်းရောင်စပျစ်ဥယျာဉ်. အနောက်နိုင်ငံတွေရိုင်းရထားလမ်းကို "Romantic ရိုင်း" ခရီး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူသိများသည်, ဒါကြောင့်သင်တလျှောက်ကိုရောက်စေဖို့ကိုချစ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုရရှိပါသည်လျှင်, အဲဒီလို. သင်တစ်ဦးမမေ့နိုင်သောအချိန်ရှိသည်လိမ့်မယ်, အနောက်ရိုင်းမီးရထားကိုသူတို့၏ဥရောပရထားခရီးစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ကြသည့်အခြားသူများကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်.
လိုင်ယွန်, The French European Train Tours
လှပသောလိုင်ယွန်သည်တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည် ပြင်သစ် နှင့်တိုင်းပြည်စစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲနေသောစင်တာ. ဒါဟာကျိန်းသေတစ်ဦးရဲ့ ပိုပြီး liveable နှင့်ဖြေလျော့ပေးခြင်း destination သို့ မြို့တော်ထက်, တိုင်းထောင့်မှာပူဇော်သက္ကာကိုဖျော်ဖြေရေး. လိုင်ယွန်ကအားလုံးကိုရှိပါတယ်: ပြတိုက်, စားသောက်ဆိုင်, ဖက်ရှင်ဆိုင်များ, နှင့်မူရင်းဆိုင်များ, အဖြစ်တစ်ဦး ဘားနဲ့ကလပ်၏ကြီးမားသောအရေအတွက်က. ဒါဟာအစတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် တက်ကြွတက္ကသိုလ် မြို့, သင့်ရဲ့ဥရောပရထားခရီးစဉ်အပေါ်တစ်ဦးအလည်အပတ်ကောင်းစွာရကျိုးနပ်. လှပသောအဆောက်အဦးများ အဆိုပါ Rhone မြစ်အပေါ်စီး, ကြီးမားသော ပန်းခြံများ, နှင့်အမျိုးမျိုးသောပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုလွှမ်းမိုးမှုကြွားတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင် - ချစ်စေခြင်းငှါအဘယျသို့မဟုတ်ပါဘူး?
[https://www.youtube.comwatch?= ပု mozmhlEKk0E
အဘယ်သူမျှမကဥရောပရထားခရီးစဉ် Tuscany ၏ပုံရှုခင်းများမှတဆင့်စီးနင်းခြင်းမရှိဘဲပြည့်စုံများမှာ. အလယ်ပိုင်းအီတလီနိုင်ငံကမ်းလှမ်းမှု၌ဤဒေသ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာမြင်ကွင်းများ သငျတို့သလုံးဝသွားရောက်ကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်သည်အကျိုးစီးပွားအတော်လေးအနည်းငယ်မှတ်ပေးပါသည်. Michelangelo ရဲ့အများဆုံးအထင်ကရ Renaissance အနုပညာ မှစ. နှင့် Botticelli အဆိုပါ Apennines အတွက်မိခင်သဘာဝတရားရဲ့အကောင်းဆုံးသောအကျင့်, Tuscany ခမ်းနားဖြစ်ပါသည်. တစ်ဦးကကောင်းကောင်းစီစဉ်ထားရထားခရီးစဉ်ဟာ Tyrrhenian ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်တွင်သင်သည်ယူနိုင်ခဲ့, သို့မဟုတ်သင်၏နာမည်ကျော်စပျစ်ဥယျာဉ်ကိုမြင်ရပါစေ Chianti.
Naples Chianti Castellina မှရထား
တစ်ဦးကရထား Save သငျသညျတှငျသငျ့ destination သို့ရထားစာအုပ်ဆိုင်ကူညီပေးသည်3မိနစ်များ, obnoxious ဘွတ်ကင်အခကြေးငွေများစျေးအသက်သာဆုံးနှုန်းထားနှင့်စိတ်သက်သာရာမှာ!
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-european-train-tours%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#travelfrance #travelspain ရထားခရီးသွား travelgermany travelitaly